FAQ - FuJian JinJiang Ruchun Shoes Co., Ltd.
Izahay dia samy mpamboatra sy orinasa mpivarotra. Manana orinasa roa misy trano izahay 3 miaraka amin'ny orinasa famokarana 3 ary tranokala miara-miasa 10 mahery.
Ahoana ny MOQ ??
Matetika 600prs isaky ny loko, 1200pr isaky ny style. Ary raha mila betsaka kokoa ianao, dia afaka miresaka bebe kokoa.
Azonao atao ve ny mandray ireo santionany arakaraka ny takinao?
Eny, afaka manao santionany araka ny famolavolana ataonao ianao ary afaka misafidy ny fomba fanaonay misy. Logos, loko, akora, marika endriny, sns rehetra ireo dia azo arahana ny filanao. Manaiky OEM & ODM izahay.
Afaka manome ohatra maimaimpoana ve ianao? Ary hafiriana manao santionany?
Izahay dia manolotra santionany maimaim-poana amin'ny alàlan'ny loko iray ary mpividy fotsiny no tokony handoa vidiny mazava amin'ny alàlan'ny kaontiny. Matetika isika no mamarana ireo santionany ao anatin'ny 7-15 andro.
Inona ny vidiny? Inona no teny andoavanao？
Manana ny orinasa manokana izahay ary afaka manolotra vidiny mora kokoa amin'ny mitovy habe sy ny kalitao. Izahay dia manaiky ny L / C eo imasony, T / T 30% deposit ary 70% manohitra ireo antontan-taratasy. Raha mangataka fomba fandoavam-bola hafa ianao dia afaka miresaka bebe kokoa.
Ahoana ny fitazanao ny kalitao tsara ary ahoana no ahafahako mahafantatra fa tsara ny famokarana?
Manana ekipa QC izay any amin'ny orinasa izahay mba hanara-maso sy hijery ny entana isaky ny baiko mba hahazoana antoka ny kalitao sy ny fanaterana entana amin'ny takian'ny mpividy. Ary mirary koa izahay fa ny mpividy dia tonga any amin'ny tranombarotra anay hanao fisafoana na hanendry fety fisavana fanadinana fahatelo hanaovana fisafoana alohan'ny fandefasana.
Manao ahoana ny fotoam-pamokarana famokarana?
Manodidina ny 30-65 andro aorian'ny fankatoavana santionany. Miankina amin'ny habetsany, ny fomba ary ny vanim-potoana.
Aiza ny orinasanao misy?
Tian Qin Technology Building West Garden Street Jinjiang, Quanzhou, Fujian, Sina.